Android Application ရေးသားနည်း ~ Saw Chit Diary
No comments | Thursday, May 16, 2013
Android Application ရေးသားနည်း အပိုင်း (၁)
Android ဆိုရင်..လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ IOS နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်.. Android က...free ရတာများပါတယ်။ Open Source ဖြစ်တဲ့အတွက်..စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Android
application ရေးသားနည်းကို..အပြင်မှာဆိုရင်.. သိန်းချီပေးပြီး..သင်တန်းတွေတတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့.. မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်.. သိသလောက်ကို..ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ညီမလည်း..စာအုပ်တွေပဲဖတ်ပြီး..လေ့လာနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ Android Application ရေးနည်းမပြောခင်..အရင်ဆုံး Android အကြောင်းကို..မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
Android ဆိုတာ..ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများအတွက်... ဦးတည်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားသော ၊ အများနားလည်လွယ်ပြီး..မည်သူမဆိုယူသုံးနိုင်သည့်.. Open Source Platform တစ်ခုပါ။ Android ကို Google မှပြည့်စုံသည့်အဆင့်ရောက်အောင်.. မွမ်းမံပြီး.. Open Handset Alliance ( OHA ) မဟာမိတ် အုပ်စုမှ..ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ OHA ၏ရည်ရွယ်ချက်က.
. wireless device များကို..ပိုမိုဆန်းသစ်ရန်နှင့်.. အသုံးပြုသူများအား..ပိုမိုစုံလင်ပြီးဈေးသက်သာသည့်.. wireless device များဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Android သည် Linux ပေါ်တွင်..အခြေခံထားပါသည်။ Linux ပေါ်တွင်အခြေခံရခြင်းမှာ.. ပေ့ါပါးခြင်း ၊ portability ၊ လုံခြုံခြင်း security နှင့် features စုံလင်မှုတို့ကြောင့်ပါ ။
Android Application ရေးသားနည်း (အပိုင်း ၂)
Application ရေးသားဖို့အတွက်.. Software ၃ မျိုးလိုပါတယ်။
- ပထမဦးစွာ.. Java SE SDK က..မိမိကွန်ပျူတာထဲတွင်ရှိမရှိကို..စစ်ဆေးရပါမယ်။
Android SDK သည် Android Platform ပေါ်တွင်... Application များရေးသားလိုသူ Developer များအတွက်..အလွန်အသုံးဝင်သော.. software ဖြစ်ပါတယ်။ Android SDK တွင် နမူနာ project များ ၊ Source Code များ ၊ Development Tool များ ၊ Emulator ခေါ် window ပေါ်တွင် Android ဖုန်းကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သည့်..ဖုန်းပုံစံငယ် နှင့် Android Application များတည်ဆောက်ရန်အတွက်.. လိုအပ်သော Libraries များပါဝင်ပါတယ်။ Java SE SDK ကို install မလုပ်ထားပါက.. Android SDk ကို install လုပ်ချိန်တွင်.. Warning Message နှင့် Error Message များကို..တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ Java SE SDK ကို install လုပ်ပြီးမှ.. Android SDK ကို install လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
- Choose Install Location နေရာမှာ C:\_User\_user\_AppData\_Local\_Android\_android-sdk လို့ပေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Android Application ရေးသားနည်း (အပိုင်း ၃)
22. Build Automation Tools နှင့်
- အရင်ဆုံး Eclipse IDE ကို download ဆွဲလိုက်ပါ။ (Eclipse IDE for Java EE Developers ကိုဒေါင်းပါ) Download Here
AndroidApp folder အောက်တွင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။
- ထို့ကြောင့် D:\_AndroidApp\_ အောက်တွင် AndroidWorkspace ဆိုပြီး folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါ့မယ်။
- OK နှိပ်လိုက်ပါမယ်။
- ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်တော့.. Eclipse IDE ကို…အောင်မြင်စွာ Install လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Eclipse IDE ကို Install လုပ်ပြီးရုံဖြင့်..ရေးလို့မရသေးပါဘူး။ Android emulator ကို..ထည့်ရပါမည်။
Android Application ရေးသားနည်း (အပိုင်း ၄)
မရေးတာကြာလို့..မေ့သွားပီလားတောင်..မသိဘူး..။ upload တင်ဖို့လုပ်နေတာမပြီးလို့ပါ။ အရင်က..အပိုင်း ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ကို..ရကြမယ်လို့တော့..ထင်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင်.. cbox မှာပဲဖြစ်ဖြစ်..
Android Application ရေးဖို့အတွက်.. Eclipse ထဲကို..ထည့်ရမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။
1 1. Android SDK Repository for Eclipse (1.5 to 4.0) // download link ကို install လုပ်သည့်အပိုင်းမှ..တင်ပေးပါ့မယ်။ zip လုပ်နေတာမပြီးသေးလို့ပါ L file size က3GHz ကျော်ကျော်ရှိလို့ပါ….
- Archive ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး.. window ပေါ်လာပါက.. ခုနက download ဆွဲပြီးထားထားတဲ့… ADT-16.0.0 (zip file ) ကိုရွေးလိုက်ပါ။
(source by : http://www.minsoeyarsar.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ )